Qaabkee Diyaaradaha Mareykanka Duqenta U Fuliyaan?..Xog Muhiim ah | Xaqiiqonews
Qaabkee Diyaaradaha Mareykanka Duqenta U Fuliyaan?..Xog Muhiim ah
Ciwaanka wararka maalinlaha ah ee aan maqalno waxaa ku badan diyaarado wax duqeeyey gaar ahaan weerarada xagga cirka ah ee droneska. Haddaba Waa Maxay Drone-tan baas?
Sid ay Qortay Hay’adda Amnesty Internatioanl waxaa sara u kacay duqeymaha Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya.
“Shanqarta Diyaaradda habeenkaasi aad ayey u badneyd, habeenadii hore diyaaradda waa ay imaan jirtay weynta tagi jirtay, balse habeenkaas diyaaraddu ma aysan tagin ilaa duqeynta ay dhacday, aad ayaan u naxay, gabbaad ayaana raadsay, seddexda wiil ee dhimatayna waligood ma filaneyin in diyaaradi ay beegsan doonto, mana filaneynin in dunida ay sdiaa u aamusi doonto”
sidaasi waxaa Amnesty International u sheegay Liban oo ah beeraley dagan Shabeelaha hoose gaar aahaan tuulada Daaru Salaam.
Taasi waa mid ka mid ah dhacdooyinka murugada leh ay ka tagtay duqeyn ay fulisay diyaarad drone ah oo Mareykanka leeyahay , laakiinse ka waran ma jeclaan laheyd in aad ogaato sidee Qalabkani u shaqeeyaa?
waa hage ku jira tababar qaabka loo wado diyaaradaha oo ku sugan goob diyaaradaha laga gaho oo ay leedahay hay’adda NASA ee Mareykanka
Duuliyaha ka tirsan ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa hagaya diyaaradiisa oo dul heehaabeysa cirka gobolka shabeelaha hoose ee somalia. ama hawada gobolka Waziristan ee dalka Pakistan, sidaaasi oo ay tahayna ma dhax fadhiyo diyaaradda,balse waxa uu dul fadhiyaa kursiga xafiiskiisa oo dhowr miles ka fog goobta , mararka qaar xitaa ma joogo goob afrika ka tirsan, waxaa laga yaabaa in uu ku sugan yahay deegaanka “Hancock Field Air National Guard Base ” oo ah goob ku dhaw NewYork.
Waxaa horyaala shaashadadaha kombiyuutar uu ka dhax daawanaayo maps-ka “khariidooyinka” iyo sidoo kale muuqaalo waxaa uuna sugayaa xilliga uu sii deyn lahaa usha ciyaartiisa, xilli uu u muuqda in uu yahay “garsooraha ciyaarta” balse shaqadu waa mid iska cad waana arin horay loo arkay in markii qalabkani aan magaca laheyn ee biiba “UAV” “Unnamed areal vehicle” dad lagu dilo waxa ay caan ku yihiin magaca ah diyaaradaha aan dulliyaha laheyn “drones”.
haddaba waxaa jira labo hab oo ay isticmaalaan diyaaradahan labadaasi hab oo kala ah:
habka kowaad ayaa ah in diyaaradda drone-ka ah ay ku xirantahay kaamiro xagga sare wax ka duubta taasi oo si LIVE ah uu ula socdo hagaha diyaarada oo laga yaabo in uu joogo meel ka fog 1,000 miles goobta ay wax ka dhacayaan.
Sidoo Kale Aqri Duqeynlogy..Cudur Cusub Oo Soomaaliya Ku Soo Kordhay!
Habkani kowaad ma ahan mid si weyn loogu kalsoonaan karo sababtoo ah mar marka qaar waxaa laga yaabaa in target-ka la duqeeyey uusan noqon kii saxda ahaa hadii joogga diyaarada ay ku biibeyso uu yahay mid sare ayna adagtahay marmarka qaar in kaamirada lagu kala saaro dadka iyo xoolaha.
Inta ugu badani diyaaradaha noocani ah waxaa ku xiran kaamiro leh “Night Vision” taasi oo ka dhigeysa hawlgalada habeenkii ee diyaaradahan mid suurtagal ah.
habkani waa mid u baahan dad jawaasiis ah oo qalabkani sensorka ah dhax geya goobta la rabo in la duqeeyo habkani danbe waa kan ugu badan ee lagu laayey dadka madaxda u ah kooxaha uu Mareykanka duqeeyo sida alshabaabta soomaaliya iyo Daacishta Soomaaliya.